युवा दीपकको दुबै किडनी काम नलाग्ने | himalayakhabar.com
युवा दीपकको दुबै किडनी काम नलाग्ने
उपचारको एउटै उपाय प्रत्यारोपण
14th Aug 2019, Wednesday | २०७६ श्रावण २९, बुधवार ०५:४१
ह्युस्टन (टेक्सस) । जीवनका हरेक मोडमा जस्तोसुकै अप्ठ्याराहरुसंग जुध्न सक्ने एउटा युवाको दुबै किडनीले काम गर्न छोडेपछि कस्तो अवस्था होला ! जस्ले यस्तो समस्या भोग्दैछ उसको पीडा उसैलाई थाहा हुन्छ । उसका मातापिता र आफन्तलाई कस्तो चिन्ता र छटपटी होला , त्यसको हिसाब अरुले लगाउने कुरै भएन । यस्तै पीडा र छटपटी ह्युस्टनका दीपक गौतम र उनको परिवारमा यतिबेला व्याप्त छ ।
दीपक गौतम भर्खरै २५ वर्ष पुग्दैछन् । तर यति नै बेला उनको दुबै किडनीले काम गर्न छोडेको छ । सामान्य मानिसको किडनी कार्य क्षमता ७० देखि १०० प्रतिशतमा आंकलन गरिन्छ । तर दीपकको किडनी अहिले ८ प्रतिशतमा झरेको छ । यसलाई चिकित्सा विज्ञानले असमान्य भन्छ ।
Management in Information System (MIS) डिग्री सकेर एउटा राम्रो कामको शुरुवात गर्ने तरखरमा रहेकै बेला दीपकलाई यस्तो रोगले च्याप्यो । गत जुन २१ मा उनको हर्नियाको सल्यक्रिया भएको थियो । त्यसले पूर्णरुपले काम नगर्दा जुलाई १० मा हर्नियाको दोश्रो सल्यक्रिया गर्नु पर्यो । अगस्त महिनाको शुरुदेखि उनको डायलिसिस प्रारम्भ गरिएको छ । दीपकले त्यस सम्बन्धी तालिम आफैं लिए , अहिले आफ्नो डायलिसिस आफैं गर्छन् । कुनैबेला नसक्ने अवस्थामा उनको बुबाले सहयोग गर्छन् ।
मेमोरियल हर्मन अस्पतालका चिकित्सक डा. राहुल प्रकास उनको उपचारमा संलग्न छन् । तर दुबै किडनी काम नलाग्ने भएपछि अब एउटै मात्र उपाय भनेको नयाँ किडनी प्रत्यारोपण नै हो - डाक्टरको निर्णय यस्तो छ ।
किडनी दानकोलागि अनुरोध
काशीराम गौतम र माया गौतमका छोरा दीपकलाई कसैले किडनी दिएर नयाँ जीवन दिनेछन् भन्ने विश्वास मरेको छैन । उनको ब्लड ग्रुप A अथवा O हो । बुबा काशीरामले आफ्नो किडनी दिन तयार भए तर ब्लड ग्रुप नमिल्दा त्यसको औचित्य रहेन । अहिले गौतम परिवार डोनरको खोजीमा छन् । जति छिटो किडनी प्रत्यारोपण हुन्छ , त्यति नै चाँडो दीपकको जीवन सुरक्षित हुनेछ ।
दीपकका बुबा काशीराम गौतम ह्युस्टनका पुराना बासिन्दा हुन् । यहाँको नेपाली समुदायमा उनको सामाजिक सक्रियताको सबैले प्रशंसा गर्छन् । ह्युस्टनमा सबैका प्रिय काशी दाइ रेष्टुँरा व्यवसायमा लामो अनुभवले खारिएका भएपनि हिजोआज उनी कामबिहीन भएका छन् । उनको स्वास्थ्य समस्याले काशीलाई व्यवसाय संचालन गर्न अप्ठ्यारो परेको छ ।
"बाबा अब तपाँइले काम गर्नु पर्दैन । म काम गर्छु ,कमाउँछु - तपाँइहरु आराम गर्नुस् ।" - छोरा दीपकले MIS डिग्री सकेपछि आफूलाई भनेको कुरा सम्झिदै काशीराम भावुक हुन्छन् ।
काशीरामलाई यस्तो कठीन अवस्थामा आफ्नो समुदाय र मित्रहरुबाट सहयोग र सद्भाव अवश्य मिल्छ भन्ने विश्वास रहेको कुरा उनले हिमालयखबरलाई बताए । खासगरी किडनी दिने दानी कसरी हुन्छ सबैको सहयोग र समर्थनले मिलोस् भन्ने उनको अपील पनि छ ।
किडनी प्रात्यारोपणकालागि त्यसको उपलब्धता र त्यसमा लाग्ने खर्च गौतम परिवारकालागि संभव देखिदैन । त्यसैले यहाँका स्थानीय संघसंस्था र सहयोगी मनहरुबाट काशीरामले अपेक्षा गरेका छन् । ह्युस्टनका नेपालीहरुको सबैभन्दा पूरानो र प्रभावकारी संस्था नेप्लिज एशोसिएसन अफ ह्युस्टनले दीपकको उपचारमा आफ्नो सक्रिय नेतॢत्वमा अग्रसरता देखाउन ढीलो गर्नु हुन्न भन्ने गहकिलो आवाज यहाँको नेपाली समुदायभित्र देखिएको छ ।
२०७६ श्रावण २९, बुधवार ०१:२६
सुनसरी । सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका–५ का प्रदीपकुमार यादवले श्रीमतीको हत्या गरेका छन् । घरमा कोही नभएको मौकामा प्रदीपले श्रीमती आनन्दी यादवको हत्या गरेको ...
२०७६ श्रावण ३०, बिहीवार ००:०४